Spectrocoin Debit Kaadị Review - Bitcoin Card Comparison 2018
Bitcoin Debit Kaadị Comparison 2018 Bitcoin E Si Nweta Kaadị – Zụrụ Bitcoin na Ebe E Si Nweta Kaadị
Bitcoin Debit Kaadị FAQ
Bitcoin Debit Kaadị Comparison
Spectrocoin Debit Kaadị Review
Spectrocoin.com Aims enye nile na-na-na-ọrụ maka Bitcoin ọrụ. N'akuku a bitcoin wallet, ha na-enye n'ọnọdụ ọrụ, a bitcoin debit kaadị, na a ngwọta maka ahịa na ịnakwere bitcoin na ha kwa ụbọchị ahịa na-eme. Spectrocoin jikọtara nkà na ụzụ pụrụ ịdabere na infrastructural agụ iji ike a elu-edu bitcoin ọrụ n'ihi na ya ahịa.
Bitcoin Debit Kaadị Spectrocoin
Services Ese Spectrocoin
Spectrocoin enye n'ihu na-azụ ọrụ nke onye ọ bụla ga-iji bitcoin gburugburu ụwa. Ha nwere a bitcoin e-wallet na pụrụ ozugbo kwụrụ ụgwọ site bitcoins zụrụ na ha onwe ha mgbanwe. The bitcoin debit kaadị na-eme ka emefu bitcoins dị mfe dị ka fiat ego. The ụlọ ọrụ na-enyekwa a ngwọta maka ahịa otú ha nwere ike na-anabata bitcoin site na ha azụmahịa eme. Iji mee ka mwekota dị mfe dị ka o kwere omume n'ihi na onye ọ bụla n'akụkụ ihe API, Spectrocoin enye eCommerce plugins na Libraries maka ahịa na ndị na maka wallet.
Bitcoin debit kaadị a kwụrụ ụgwọ n'otu ntabi na bitcoin, otú ọ dịghị mkpa na-agbanweta na cryptocurrency tupu nke ịkwụ ụgwọ. The visa na plastic kaadị nwere ike ji mee n'oge ọ bụla igwe ndọrọ ego gburugburu ụwa, na denominated isi ego na-USD, EUR na GBP. Ma ndị plastic na virtual kaadị na-anabatara karịa 20 nde na saịtị na online ụlọ ahịa gafee internet. Ha na-enyekwa otu nhọrọ maka azụmahịa nwe ka ịgbanwee gaa na Bitcoin ugwo maka arụmọrụ. Spectrocoin awade ụlọ ọrụ kaadị ka a ngwọta maka ndị na-otu nzọụkwụ n'ihu na digital ụwa.
Spectrocoin kaadị - N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ bitcoin debit kaadị - na-Ẹnam ekese ka mba ọ bụla nke ụwa, gụnyere India na China kwa na maka US ụmụ amaala nakwa. Nkịtị mbupu ma ọ bụrụ na free na kaadị-abịa 3-4 izu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-achọ na adị na mbupu, maka ihe mmezi ego nke $ 75 / ?? 69 / £ 50 na expedited mbupu nhọrọ dị. Na nke a na kaadị nwere ike ịbụ na onye ọrụ ?? s aka na 4-5 ụbọchị.
Spectrocoin kere ama ngwa ọdịnala n'ihi na ndị chọrọ iru ha ego ke laa. Na ndị ga-?? t mkpa na? The Spectrocoin wallet bụ pụrụ ime eme na Google Play, App Store na-na Windows Store.
The ọrụ na-eji abụọ na-akpata ikike maka nbanye. The nkwenye usoro adịghị akowaputara juputara na ha na website. Iji nyochaa ọrụ onwe ha, ha ga-enye a na-nti paspọtụ ma ọ bụ ID kaadị na a na ịba uru ụgwọ. The AML iwu na-enye nkọwa na akwụkwọ, ma ọ dịghị ihe ọmụma na ole usoro onwe ya na-ewe ma ọ bụrụ na niile na-aga nke ọma.
Kwupụtara ọrụ nwere ike ibu ha Spectrocoin kaadị na kacha 10000 USD otu mgbe. Spectrocoin enye ohere max 2 Igwe ndọrọ ego azụmahịa kwa ụbọchị, na a ngụkọta ego nke 2000 USD. E nweghị ịgba maka naa ojiji na maka kwupụtara ọrụ Spectrocoin awade naa ibu ọrụ kwa. Ọ bụrụ na ndị Spectrocoin kaadị kwupụtara, ọ bụ ike na-enweta ego si ọzọ ahịa dị ka PayPal na Ịgba chaa chaa saịtị. Ọ bụrụ na ọ bụla ego na-natara site unverified kaadị, ndị a ego na-egbochi ruo mgbe kaadị a na-kwupụtara.
Mkpuke ọrụ nwekwara ike iji Spectrocoin ọrụ, Otú ọ dị ha na-ahụ gụrụ ụfọdụ ókè. The kacha top-elu ego bụ naanị 2500 USD. Na ATMs mkpuke ọrụ ndị na-enwe ike ịdọrọ 200 USD na a otu oge, 400 USD kwa ụbọchị site na kacha 2 azụmahịa. Total igwe ndọrọ ego ndọrọ ego anọru unverified ọrụ bụ 1000 USD. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọbụna unverified ọrụ nwere ike ịzụ ahịa online ma ọ bụ na-akwụ na naa ọnụ na-akparaghị ókè ego nke ego ha bitcoin debit kaadị. Naa ibu ọrụ bụ maka unverified ọrụ.
The UK dabeere Spectrocoin e ulo oru na 2013. The ụlọ ọrụ nwere ya headquarter na Landsdowne Ahịrị, London. Ha malitere inye bitcoin debit kaadị ke May, 2015.
Ọ bụ ezie na Spectrocoin dịghị depụta ha nwe na na website, dị ka Pitchbook na LinkedIn na bitcoin-eweta ọrụ na-ekesịpde site na atọ ndị si Lithuania.
Vytautas Karalevičius tupu ego Spectrocoin, nwere n'ọrụ dịgasị iche iche dị ka ego nyocha na ụlọ ọrụ. The atọ nwe bụ Mantas Mockevicius onye nwere otutu degrees mba na mba azụmahịa ọmụmụ. Justas Dobiliauskas bụ isi technology ojii na mmalite ruru ya 6+ afọ ahụmahụ s a Mmepụta na enterprise software emebe ụlọ ọrụ.
Ịnye ọnụahịa na Ụgwọ
Spectrocoin plastic bitcoin kaadị na-akwụ ụgwọ $ 9.00 / ?? 8.00 / £ 6,00, mgbe virtual kaadị bụ naanị $ 0,50 / ?? 0,50 / £ 0,50. E nwekwara a kwa ọnwa ego ọrụ ego nke 1 USD ma plastic na mebere kaadị. Otú ọ dị nke a ego na-adịghị na ebubo ma ọ bụrụ na nke itule nke na akaụntụ bụ efu. Ọzọkwa, na e nweghị na-arụ ọrụ ego, ka ọrụ nwere ike ịnwale kaadị dịtụ mfe ma dị ọnụ ala.
Loading akwụ ụgwọ nke na kaadị ndị free ma ọ bụrụ na ego na-na-abịa site a Spectrocoin akaụntụ. Ma ọ bụghị ndị loading na-akwụ ụgwọ na-adabere na usoro eji: na-enyefe site na akụ bụ free ma via kaadị ha ana ruo 5%. Ọ bụrụ na kaadị ibutu ka a bitcoin wallet, ọ na-efu 0.5% na a kacha nta ego nke $ 1.00 / ?? 1.00 / £ 1.00 na onye ọ bụla bitcoin zuo azụmahịa. Ya mere otutu enyefe na obere nwere ike na-eri a ọtụtụ na njedebe nke a ọrụ.
Mgbe na-eji ATMs, Spectrocoin ebubo 2.5 USD anụ ụlọ ego ndọrọ ego na 3.5 USD maka ndị ọzọ ego ndọrọ ego. E nwekwara a 3% mgbanwe ego ego na a na ebubo ma ọ bụrụ na ụgwọ bụ na e mere ndị ọzọ karịa nke ndabere ego. Mgbe anata ego na kaadị, na naa ibu ego bụ 1.99%.
Spectrocoin-enye dị nkezi bitcoin mgbanwe price na ha na saịtị. The bitcoin price na-nyere na 26 ego, gụnyere price ọlaedo na altcoins ka gbaara kwa. The Spectrocoin bitcoin price bụ n'ime anabata ikele-enye iche iche nke nkezi bitcoin price na ahịa.
price $9.00/€ 8.00 / £ 6,00 $0.50/€ 0,50 / £ 0,50
nnyefe 3-4 izu ozugbo
Monthly ego ọrụ ego ** $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
ịnọ nkịtị ego FREE / FREE / FREE FREE / FREE / FREE
Kaadị n'elu si SpectroCoin akaụntụ 0% 0%
Kaadị Bitcoin wallet (ịzụ bitcoin) 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
Igwe ndọrọ ego ndọrọ ego na anụ ụlọ ego $2.5/€ 2,25 / £ 1,75 –
Igwe ndọrọ ego ndọrọ ego na ndị ọzọ ego $3.50/€ 2,75 / £ 2,25 –
3Rd party ibu 1.99% 1.99%
Mgbanwe ego *** 3% 3%
nkịtị mbupu (ruo 3-4 izu) Free –
expedited mbupu (4-5 ụbọchị) $75/€ 69 / £ 50 –
User Ahụmahụ Spectrocoin
The n'elu ikpo okwu nke Spectrocoin nwere a-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo style na a na-enweghị ntụpọ imewe. Iji mfe ọgụgụ nke tebụl dị ka ịnye ọnụahịa oge, ndị kapịrị ọnụ e nyere ahịrị ndị mesiri ike na ọ pụta ìhè. obere ihe, ma na-enyere a ọtụtụ ma ọ bụrụ na a onye ọrụ na-achọ a amakụ table na otutu ahịrị.
Mgbe bitcoin price ngalaba, e nwere a chaatị egosi bitcoin price n'ihi na a nyere timeframe. Ọrụ nwere ike mfe na-agụ akụkọ ihe mere eme ahịa kpọmkwem site na chaatị dị na nke ọ bụla n'ime 26 ego.
Spectrocoin website ọ bụ ezie na na-enye ọtụtụ ihe ọmụma na ọrụ, ka na-adịghị na-agụnye ihe niile kemfe na a mee ihe n'ọdịnihu ọrụ nwere ike mkpa. The FAQ adịghị enye a search ọrụ. The nkwenye usoro iheomume na-adịghị akowaputara. Ndị nwe nke ụlọ ọrụ na-adịghị depụtara na saịtị. Ndị a ozi naanị adịghị ka oke mkpa, ma mgbe a onye ọrụ na-achọ ihe na-apụghị ịchọta, ọ nwere ike na-ewute ewute. N'ihi ọnọdụ ndị a Otú ọ dị na Hot Line na Nkwado ga-enwe ike ịpụta ihe.
Ihe na-akpali dị mkpa iji tinye bụ Google search results nke Spectroin. Ọ anya dị ka ụfọdụ ndị ọrụ nwere mbipụta na ụlọ ọrụ dị ka ndị bitcoin forum nwere ụfọdụ na-emeghe isiokwu banyere ndị mmadụ mkpesa banyere Spectrocoin kpochidoro bitcoins na bụghị anabatakwa gbara ajụjụ. Spectrocoin site otú anya na-gbachiteere onwe ha na ndị a na ebubo. Ọ na-a maara nke ọma na mgbe a bitcoin mgbanwe akụkọ na bitcoins bụ mgbe mma, otú anyị na-agba onye ọ bụla na-echekwa ha bitcoins n'enweghị.
Bitcoin emere Card Limits
Max nọmba nke Top-gbasie kwa ụbọchị 2
Max Top-elu ego kwa zuo $10,000/€ 10,000 / £ 8,000
Max Top-elu ego kwa ụbọchị $20,000/€ 20,000 / £ 16,000
Naa ibu *** Ọ dịghị ịgba
Max ndụ ibu Ọ dịghị ịgba
Max ọgụgụ nke igwe ndọrọ ego azụmahịa kwa ụbọchị 5
Max otu igwe ndọrọ ego ndọrọ ego $1,000/€ 1,000 / £ 800
Max igwe ndọrọ ego ndọrọ ego kwa ụbọchị $2,000/€ 2,000 / £ 1,600
Total igwe ndọrọ ego ndọrọ ego ịgba Ọ dịghị ịgba
Max naa ego kwa ụbọchị (ụlọ ahịa) Ọ dịghị ịgba
Max nọmba ibuputa na Bitcoin obere akpa azụmahịa kwa ụbọchị 2
Min ibuputa na Bitcoin obere akpa $2/€ 2 / £ 2
Max ibuputa na Bitcoin obere akpa $2,250/€ 2.250 / £ 2,000
Total ndụ butuo si kaadị Ọ dịghị ịgba
Spectrocoin enye mgbagwoju ọrụ maka Bitcoin ọrụ. The bitcoin debit kaadị dị maka niile ọrụ uwa dum nke bụ a nnukwu pro ka ọtụtụ bitcoin debit kaadị ụlọ ọrụ anaghị akwado US ụmụ amaala. The ọrụ isi na-gbasaa na Windows mobile ọrụ na yighị na ndị ọzọ bitcoin debit kaadị na enye. Ọ bụ ezie na ọrụ na ịnye ọnụahịa dịtụ ezigbo, mbupu bụ ọnụ na mkpesa gburugburu internet nwere ike mmenyenjo furure ọrụ si n'elu ikpo okwu.
e site Themient